CPanel အကြောင်း တစ်စေ့တစ်စောင်း | mmshare
CPanel ဆိုတာ Web Hosting account တွေကို Manage လုပ်နိင်တဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲ tool တစ်ခုဖြစ်ပြီး Linux, IIS အပါအဝင် Web hosting တိုင်းလိုလိုမှာ CPanel ကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
Hosting တစ်ခုအတွက် CPanel ကို သုံးတော့မယ်ဆိုရင် အခုလို အောက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ အတိုင်း အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
ဒီ link တွေကတော့ ကိုယ်ဝယ်ထားတဲ့ Hosting ဒါမှမဟုတ် ကိုယ်လုပ်ထားတဲ့ Domain setting တွေအတိုင်း ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
Step 1 – Managing Your Files with File Manager
CPanel မှာ အသုံးဝင်တဲ့ Tool တွေ အများကြီးပါရှိ ပါတယ်။ အဲဒီအထဲက ပထမဆုံး အနေနဲ့ မိမိတို့ ရေးဆွဲထားတဲ့ Web Page file တွေကို Hosting ပေါ်မှာ တင်တဲ့အခါ အများဆုံး အသုံးပြုရတဲ့ အလွန်အသုံးဝင်တဲ့ File Manager အကြောင်းကို ပြောပြချင်ပါတယ်။
Hosting ရဲ့ CPanel ကိုဝင်ပြီး “Files” ခေါင်းစဉ်အောက်ထဲက File Manager ကို Click နှိပ်ပြီးဝင်လိုက်ပါ။ (များသောအားဖြင့် Web Page File များ Upload ပြုလုပ်ခြင်း၊ ပြင်ခြင်း ၊ ရွှေ့ခြင်းတွေ အတွက် FTP Program အသုံးပြုကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်ခါတစ်လေမှာ FTP Program ထဲမှာ မပါတဲ့ Feature တွေကိုသုံးပြီး ပြင်ဆင်ချင်တယ် ဆိုရင် File Manager ကို အသုံးပြု ပြင်ဆင်နိုင်ပါတယ်။)
File Manager ကို click နှိပ်လိုက်တာနဲ့ “File Manager Directory Selection” Popup တက်လာတဲ့ အခါ Web Root (public_html/www) ကို ရွေးပြီး Goကို Click လုပ်ပါ။
File Manager ထဲကို ရောက်သွားတာနဲ့ System ထဲမှာ ရှိပြီးသား File & Folder တွေကို တွေ့ရပါမယ်။ Web Page File တွေကို "public_html" Folder ထဲမှာ Upload လုပ် ရမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် "public_html" Folder ကို Double Click ပြီးဝင်လိုက်ပါ။
Note: Main Domain အတွက် Web page file များကိုတော့ public_html ထဲမှာပဲ Upload လုပ်ရပါမယ်။ (အခြား Website များကိုလည်း လက်ရှိ Hosting မှာပဲ Host လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ သီးခြား Folder ဆောက်ပြီး Upload လုပ်ပေးရပါမယ်။)
တစ်ကယ်လို့ ကိုယ့် Hosting မှာ Web site အများကြီး ထားမယ်ဆိုရင် Web site တစ်ခုခြင်းစီ အတွက် public_html folder ထဲမှာ သီးသန့် Folder တစ်ခုခြင်းစီ ဆောက်ပြီး၊ သက်ဆိုင်ရာ Website အလိုက် ဆိုင်ရာ ဆိုင်ရာ ဖိုင်တွေ Web page တွေကို Upload လုပ်ရပါလိမ့်မယ်။
Folder အသစ်ဆောက်ဖို့ အတွက် “New Folder” ကို Click လိုက်ပါ။
ပေါ်လာတဲ့ Popup မှာ နှစ်သက်ရာ “Folder Name” ပေးပြီး “Create New Folder” ကို Click လိုက်ပါ။
အခု အသစ်ဆောက်လိုက်တဲ့ Folder ထဲမှာ သက်ဆိုင်ရာ Web site အတွက် Web Page File များကို Upload လုပ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ (“File Manager” မှာ Upload လုပ်လို့ရသလို FTP Program များကို အသုံးပြုပြီးလည်း Upload လုပ်နိုင်ပါတယ်။)
အခု ဆက်ပြီး FTP Program ကို အသုံးပြုပြီး Web Page file တွေကို ဘယ်လို Upload လုပ်ရမယ် ဆိုတာကို ပြောပြ ပေးသွားပါမယ်။
FTP Program တွေ အများကြီး ရှိတဲ့အထဲက web based ဖြစ်တဲ့ net2ftp.com ကို အသုံးပြုပြီး Upload လုပ်သွားပါမယ်။ http://www.net2ftp.com ကို သွားလိုက်ပါ။
- FTP Server မှာ Web Hosting ၏ Main Domain ကိုထည့်လိုက်ပါ
- Username မှာ Hosting user Name ကို ထည့်ပါ။
- Password မှာ Hosting Password ကို ထည့်ပါ။
Login လုပ်လိုက်ပါ။ အခု အခါHosting “Files Manager” ထဲမှာ ရှိတဲ့ File & Folder များကို တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Web Page File တွေကို upload လုပ်ဖို့ အတွက် “public_html” folder ထဲကို click လုပ်ပြီး ဝင်လိုက်ပါ။ ပြီးတော့ file တွေကို Upload လုပ်ရန်အတွက် သက်ဆိုင်ရာ folder ထဲကို ဝင်လိုက်ပါ။ သက်ဆိုင်ရာ Folder ထဲရောက်ပြီ ဆိုရင် Upload ကို click လိုက်ပါ။
Upload လုပ်ရမယ့် နေရာ ရောက်ပြီဆိုရင် “Files” ခေါင်းစဉ်အောက်က Browse ကို click နှိပ်ပြီး Upload လုပ်မယ့် ဖိုင်ကို ရွေးချယ်ပြီး အပေါ်နားက အမှန်ခြစ် လေးကို click လိုက်ပါ။
အထက်ဖော်ပြပါ နည်းအတိုင်း web page file တွေကို “Upload” လုပ်နိုင်ပါတယ်။
ဒါမှမဟုတ် File အများကြီးကို zip လုပ်ပြီးတော့လည်း upload လုပ်နိုင်ပါတယ်။ Zip File Upload လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ ညာဘက် အခြမ်းမှာရှိတဲ့ “Archives (zip, tar, tgz, gz)” ခေါင်းစဉ်အောက်က “Browse” ကို ရွေးပြီး Upload လုပ်နိုင်ပါတယ်။ Zip file ကို Upload လုပ်လိုက်ရင် FTP Program က အလိုအလျောက် zip ဖြည်ပေးသွားပါတယ်။
အပိုင်း (၂) အနေနဲ့ Add on Domain တွေ အကြောင်း ဆက်ပြီး ပြောပြပါ့မယ်။ စာဖတ်သူ ညီအကို မောင်နှမများ ကိုယ်စိတ်နှလုံး ရွှင်လန်း ချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်... :)
m0rRis (not verified)
Thu, 10/25/2012 - 06:35
According to hosting
According to hosting providers , some use WHM and pleskpanel
Wed, 10/31/2012 - 03:03
Their own Pros and Cons
Well both CPanel and Plesk have their own pros and cons.
The following links are some useful comparisons and discussions between these two.
cPanel vs. Plesk - Side by Side Functionality Comparison - Hostgator (link at new window)
Plesk VS Cpanel - Web Hosting Talk (link at new window)
5 Differences Between Plesk & CPanel - WhoIsHostingTHis (link at new window)
Some discussions may beabit out of date, but most are still useful.
WHM and Plesk.
Yes, you are right. Some hosting use WHM and Plesk.
Both WHM and Cpanel are from the same company. "WebHost Manager (WHM) isaweb-based tool used by server administrators and resellers to manage hosting accounts onaweb server. Cpanel is for normal hosting.
Some of web hosting "Basic Plan" not included "WHM" service. I write this "Article" for Beginner.So, I choose easiest way.
More articles by Snow